प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई बनाउन माग गर्दै बन्द - EAAWAJ (इ-आवाज)
प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई बनाउन माग गर्दै बन्द
धनकुटा : प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटालाई तोकिनु पर्ने माग गर्दै जिल्लाबासीले सोमबार धनकुटा बन्द गराएका छन् । आईतबार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेर सरकारलाई ज्ञापन बुझाएका धनकुटाबासीले सोमबार बिहानैदेखि बजार बन्द गराएका छन् ।
बजारका पसल पूर्ण रुपमा बन्द छन् । धनकुटा भएर चल्ने लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । यातायातका साधन नचल्दा धनकुटा हुँदै तराई तथा भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम लगायतका जिल्ला जाने सावारीसाधन ठप्प छन् ।
सरकारी सवारी साधान समेत बन्दकर्ताले चल्न दिएका छैनन् । सुरक्षाकर्मी सवार गाडी र एम्बुलेन्सलाई भने सहज रुपमा चल्न दिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले बताए ।
धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन (एन प्याब्सन)ले समेत विद्यालय बन्द गरेका छन् ।
जाडो बिदालाई कटाएर बन्दलाई समर्थन गरेको प्याब्सन प्रदेश नं. १ का कोषाध्यक्ष नन्द न्यौपानेले बताए ।
← गुजरातमा फेरि भाजपाकै सरकार बन्ने
नाली निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न स्थानियको माग →